One of the royal artifacts returned by British in 1964. The jeweled flower casket was part of the royal regalia that was greatly revered, for it played an important role in ceremonies to make royal vows and express wishes.
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၆၄ -ခုနှစ်တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော နန်းတွင်းပစ္စည်းများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မင်းတို့ အစဉ်သုံးဆောင်ရာ၊ အရိုအသေပြုရာ၊ သစ္စာအဓိဌာန်ပြု၍ ဆုပန်တောင်းရာ၌ သုံးသော အမွန် အမြတ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Diameter 36 cm.; circumference 178 cm.
Royal Regalia; making royal vows and expressing wishes.
Originally the vessel was kept asaroyal artifact in Mandalay in the Mya Nan San Kyaw Palace. After annexation by the British, the royal artifacts were transferred to London and displayed at the Victoria and Albert Museum. The object was returned to the Union of Myanmar in 1964 from England and transferred to the National Museum in the same year.
အချင်း - ၃၆ စင်တီမီတာ၊ အ၀န်း - ၁၇၈ စင်တီမီတာ
မင်းတို့သစ္စာဆိုရာ၌လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဓာတ်တော်၊ မွေတော် တို့ကို ဌာပနာ၍ ဘုရားစေတီတည်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည်။
မူလက မန္တလေးမြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်တွင်ထားရှိသည့် မင်းခမ်းတော်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှမှ သိမ်းပိုက် ပြီး နောက် လန်ဒန်ရှိ ဗစ်တိုးရီးယားနှင့်အဲလ်ဘတ်ပြတိုက်တွင်ပြသရန် ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၆၄ -ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းနှစ်တွင်ပင် အမျိုးသားပြတိုက်သို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
National Museum of MyanmarAD 9th century ~ AD 19th century Decorative ArtGold, RubyUnknownMandalay, Central Myanmar